Glossy chipikiri polish inonzwa kujairana. Naizvozvo, vafashoni vane chishuwo chakaringana chekusiyanisa dhizaini. Matte manicure ipfungwa iyo ichangobva kuoneka. Zvishoma nezvishoma, dhizaini yezvipikiri zvakahwina ...
Perfume "Chakavanzika chaVictoria" (Chakavanzika chaVictoria): wongororo, mitengo
Iyo inozivikanwa American brand Victoria Chakavanzika chakakumikidzwa mukugadzira akanaka uye anonhuwirira zvidimbu. Chaizvoizvo, ichi chiratidzo chinogadzira muunganidzwa wekunaka zvipfeko zvemukati zveiyo "yakasarudzika" kirasi, pamwe ne ...
Nzira yekugadzira manicure nemakomba?
Maoko evakadzi anofanirwa kugara achitaridzika nekutsvinda. Manicure ndiyo yekupedzisira nhanho yesita dhizaini. Inogona kukwana zvakakwana ichi kana icho chifananidzo, kana inogona kuve isina kukodzera zvachose. Muchikamu chino ...
Tattoo "chikepe": ndezvipi zvinoreva zvakavanzika zvemufananidzo uyu?
Unogona kuratidza hunhu hwako nenzira dzakasiyana: mumwe munhu anofarira kuzviita neruoko, kugadzira zvinhu zvepakutanga uye zvakasarudzika, mumwe munhu anosarudza kutenga uye anoratidza maitiro avo nehembe, uye mumwe munhu anosarudza kupi ...
Iyo mint color yakatove yakazivikanwa seyakaitika mwaka unotevera. Vagadziri vefashoni kutenderera pasirese vari kushingaira kushandisa iri rakapfava bhuruu-mwenje munyoro mumvuri mune avo matsva kuunganidzwa. Haisi kuregererwa mumvuri une muto nezvipikiri zvemafashoni, nekuti iyo manicure ndeye mint ...
Alien - pefiyumu naT Thierry Mugler. Perfume kuumbwa, kunhuwirira uye kuongorora kwevatengi
Nhasi tichaedza matatu emhando yezvigadzirwa zveimba yaThierry Mugler anonzi Alien: pefiyumu (kana zvirinani, eau de parfum) "Alien" nevakoma vake vaviri - "O Extraordinair" uye "Sanness". Hazvigone kutaurwa kuti ...
Tom Ford anozivikanwa, ane chinzvimbo uye wepakutanga hunhu uyo ​​akawana kuzikanwa mukutungamira kwefirimu, zvivakwa uye pefiyumu. Uyu murume akagadzira humambo nemaoko ake uye ndokugamuchira zita remadunhurirwa rekuti "mambo asingagadzirike". Nekudaro, iye kwete chete ...
Maitiro ekudzoreredza ganda kana LPG massage yakatanga kushandiswa makore makumi matatu apfuura. Muchina weLPG wakagadzirwa nenjinjini weFrance mushure mekunge aita tsaona uye aifanira kutora kosi ...
Yakareba fluffy eyelashes anoita kuti mukadzi ataridze zvakanyanya kuratidza uye asinganzwisisike panguva imwe chete. Avo avo nemasikirwo havana kuita rombo rakanaka kuti vave neizvozvo vanogona kushandisa yekuwedzera sevhisi. Mazhinji salons anoipa ...
Compass - nyora yerombo
Iyo kambasi haigone kutsiviwa munzira. Ichi ndicho chikonzero nei vafambi vazhinji vanoshongedza vachishongedza miviri yavo nematato ane mavara nemufananidzo wake. Iyo kambasi itatoo inogadzirwa kwete chete nevanodzungaira vane rudo, asiwo ...
Rowan bvudzi dhayi: pendi pendi, wongororo
Rowan bvudzi dhayi, iyo palette iyo inopa kune vasikana vangangoita makumi matatu akasiyana shades, inozivikanwa. Pane zvikonzero zvinoverengeka zveizvi. Vakadzi vanoshandisa "Rowan" chinyorwa kuti chisingadhuri, chisina hwema, kwete ...
Hazvigoneki kuti pane kana musikana mumwe chete pasi pano anonyatsogutsikana nechitarisiko chake. Chinhu chinosungirwa kunge chisina kunaka. Asi kazhinji vasikana havagutsikane neganda ravo, izvo hazvishamise kupihwa mamiriro azvino nharaunda ...
Munguva pfupi yapfuura, zvaive zvichikwanisika kuwana manicure chete mune yepamusoro salons uye nemutengo wakakwira kwazvo. Nguva dziri kuchinja, musika webasa uri kukura. Nekudaro, iro reshiyo yemutengo uye mhando muindasitiri indasitiri, kunyangwe iine ...
"Faberlik", "Double mumiririri" hwaro: wongororo. Zvakavanzika zve Makeup
Nheyo ndechimwe chezvinhu zvikuru zvehombodo yevakadzi yekushongedza, isina iyo isina magadzirirwo anogona kuita: mazuva ese kana manheru Icho chivande chinogona kuviga kusakwana muganda, kuneta ...
Chii ichi chinonhuhwira chinongedzo - vetiver? Iko kunhuwa kunoratidzika sei? Vetiver mushonga kubva kumhuri yezviyo, inokurumidza kukura isingagone kusvika makore makumi mashanu kana kupfuura. ...
Isu kazhinji tinongofunga nezvezvinonhuwira sezvakawedzera kune chikafu. Asi munyika zhinji dzekumabvazuva vanorapwa nenzira yakasiyana zvachose. Vanhu vanogara ipapo vanovanamata uye vanovatora se "chaiwo zvipo zvevamwari." ...
Pasina mubvunzo, bangs ichave yakajeka yeakanaka chero bvudzi. Dzimwe nguva iwe unoda kusiyanisa mufananidzo. Asi nzira yekukura bang kuitira kuti isapindire, haina kukonzera kusagadzikana uye, pakupedzisira, haina kukanganisa kutaridzika kwemazuva ese ...
David Beckham, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi nevamwe vatambi vazhinji vanorangarirwa nesu kwete chete pamutambo wavo wekutanga, asiwo nevhudzi ravo risina kujairika. Kunze kwematarenda emitambo, ivo vanopihwa nemanzwiro ekuravira. About…
Iyo yakanaka uye inogara-refu manicure kurota kwevasikana vazhinji. Uye yakava yechokwadi nekuuya kwejel polishes ayo anogara kwenguva refu sekuwedzera kwembambo uye nyore kushandisa senge chipolishi. Yakakwana ...
Hematomas (mavanga) nderimwe rematambudziko akaomesesa, kunyanya muzviitiko zvaasingakwanise kuvanzwa kubva munharaunda. Maitiro ekuonekwa kwehematoma iri nyore: mushure mekukuvara kune zvakapfava, kunyanya zvine mutsindo matinji kana ...
Mibvunzo ye49 mu database yakagadzirwa mu 1,298 masekondi.